EyoMsintsi 3, 2018 admin
ukuvota izilingo isixeko Japanese blockchain-based online
A urhulumente isixeko waseJapan uye waba ngowokuqala kweli lizwe ukuba yahlola inkqubo blockchain-based ekuvumela abahlali ivoti ukuba isigqibo kwiinkqubo zophuhliso lwasekuhlaleni. Urhulumente Tsukuba, isixeko eyaziwa ngokuba indima yalo kuphuhliso nakwisayensi ukususela ngo-1960, lugqityiwe uvavanyo blockchain kwi Aug. 28 nge 119 iivoti bahlangana.
Le ngxelo ithe inkqubo ihlanganise umatshini yokuqinisekisa identity umnatha eyaba. Emva ngokubeka ikhadi ID kwi kumatshini ukuze ingqinwe, abavoti wahlabela mgama ukukhetha iinkqubo ayikhethayo. Le nkqubo ngakumbi asongiweyo kunye agcinwe idatha ye bavotele nge uthungelwano loyo-ubungqina asasazwa. Ukuba isicelo ibonisa uphumelele emva ukubuyekeza, urhulumente wengingqi ulindele ukuba ukwandisa inkonzo kubahlali abahlala kwimimandla eneentaba, iziqithi ezikude kunye namazwe angaphandle.
Ingxelo Daily Market Kraken for 02.09.2018
$86M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje